प्रेममा किन हुन्छ धोका, यस्ता छन् कारण ! - Nepal Japan
नेपाली समय : 03:54:48
जापानी समय : 07:09:48
प्रेममा किन हुन्छ धोका, यस्ता छन् कारण !
24 June, 2019 16:52 |बिचित्र | comments | 29850 Views
प्रेम भगवानको स्वरूप, अपनत्वको भाव, मजबूत स्नेहको एक भावना र व्यक्तिगत लगाव पनि हो । भनिन्छ प्रकृति प्रेमको खानी हो ।
चराचर जगत प्रेमले भरिपूर्ण छ, मात्र प्रेमलाई अनुभुति गर्न सक्नुपर्छ । विलियम सेक्सपियर भन्छन ‘प्रेम आँखाले होइन मस्तिष्कले गर्छ’ । निकोलस स्पार्कस भन्छन ‘प्रेम हावा जस्तै हो । यसलाई देख्न सकिदैन, केबल महसुस गर्न सकिन्छ ।’ लाओ चु भन्छन ‘कसैको गहिरो प्रेम पाउनाले तपाईंलाई शक्ति मिल्छ, कसैलाई गहिरो माया गर्दा तपाईंलाई साहस मिल्छ ।’
प्रेममा धोका हुँदैन । प्रेममा त प्रेम नै हुन्छ । धोका भयो भने त्यो प्रेम होइन, जाल मात्र हो । प्रेममा मिसावट हुँदैन, मिसावट भएको प्रेम हुँदैन । प्रेम शुद्ध हुन्छ। आजकाल प्रेम गरिन्छ र गराइन्छ । समयक्रमसँगै विचार र क्रियाकलापहरू बदलिँदै जान्छन् । समयसँगै पहिलेको जस्तो धारणा र सम्पर्कमा कमी आउँदै जान्छ । के तपाईँले प्रेममा धोका पाउनुभएको छ रु छ भने यो दुखःको पिडा कति हुन्छ भनेर तपाईँलाई राम्ररी थाहा होला। कसैको प्रेममा फस्नु लागू पदार्थको नसामा धुत हुनु जस्तो हुन्छ । प्रेममा धोका हुने कारणहरु यस प्रकार छन् ।